သတင်းစကားနှင့်သတင်းပြန်ကြားချက်များ – နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်အာဏာလုယူမှုကြီး (၂၀၂၁) – Civilised Forums of Myanmar Community
Topic starter 13/02/2021 4:02 pm
ဤအကြောင်းအရာခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖဝါရီ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့များ၏ နိုင်ငံတော် အာဏာလုယူမှုကြီးတွင် ရရှိသည့် သတင်းအတိုအထွာများ၊ ပြည်သူလူထုထံမှ သတင်းစကားများ၊ သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့်‌ဝေဌသည့် အချက်အလက်များတို့ကို ပူးတွဲစုစည်းထားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာမျက်နှာအောက်ဖက်တွင် ပေးထားသည့်အကွက်မှာ ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
13/02/2021 4:03 pm
စစ်တပ်ပိုင် ဘဏ်များ ‌‌ပိတ်ဆို့ ခံရတော့မဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ဆိုသူမှ Facebook ပေါ်တွင် ဖြန့်ဝေနေသော စာကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်၊ ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိ စစ်တပ်၏ အကျိုးစီးပွားကို အားပေးအားမြှောက် ပြုမှု ဆန့်ကျင်ဖို့မှာ ထိုသူရဲ့ အကြံပေးတိုက်တွန်းချက်ကို ထောက်ခံ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီဘဏ်နှင့် အင်းဝဘဏ် အပါအဝင် စစ်တပ်ဆက်နွယ်သော ကုမ္မဏီတို့အား နိုင်ငံတကာမှပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူပါတော့မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါဘဏ်တို့တွင် ငွေစုထားမိသူများ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ထုတ်ယူထားကြပါရန် ။ မကြာခင် စစ်တပ်ပိုင်ဘဏ်များ ဒေဝါလီခံရတော့ပါမည်။
ထပ်ပြောပါမယ့် မြဝတီဘဏ်နှင့် အင်းဝ မှာ အပ်ငွေများ အမြန်ထုတ်ကြပါ!!!
မနေ့ညက ထောင်ထွက်တွေကို ဘိန်းကျွေးပြီး ရပ်ကွက်တွင်းမှာ မီးကွင်းပစ်ခိုင်းတယ် ကြားသိရပါတယ်၊ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းရတာက -
ဖမ်းမိတဲ့သူကို ဆားရည်တိုက်လိုက်တာ ပြန်သတိရလာပီ အကုန်ပြောပြသွားပါတယ် ခိုင်းတဲ့သူနာမည်ကော ဘာအတွက်ကောအကုန်သိရပါပြီ မနက်ဖန်မနက်ကို သတင်းဌာနတွေဆီ video ဖိုင်တွေပို့ပါမယ် ဖမ်းမိတဲ့လူရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်း ရပ်ကွက်က တာဝန်ယူထားပါတယ်။
နေရာတကာ သေနတ်တပြပြနဲ့ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ကြီးတွေက ချောက်ထဲကျခါနီး လက်နှလုံးအလို ကယ်တင်နေတာများဗျာ -
၁၀-၁၂ နှစ် ကလေးကို ငွေ ၅ သိန်းပေး မီးရှို့ခိုင်းတာ။ လည်ပင်း နှနေရာ ဆေးထိုးလွှတ်တယ်၊ စစ်တပ် ခိုင်းသတဲ့။
နောက်တယောက် ၁၉ နှစ် ကောင်လေး။ ၃ ပွင့် ရဲ ခိုင်းတာတဲ့။ ဘာလုပ်ခိုင်းမှန်း မသိသေးဘူး။ နောက်ထပ်တယောက်ကျ လူလတ်ပိုင်း။ ကြောင်တောင်တောင် မျက်နှာပေးနဲ့ အဖြေမပေးဘူး။ ဆေးထိုးခံထားရတာ။
ကလေးတွေကိုပါ ထိုးကျွေး ချနင်းနေတာ ရွံလိုက်တာ။ ထွီ !
ဖိုင်တွေက အောက်မှာ -
14/02/2021 11:17 pm
၁၂-၀၂-၂၀၂၁ ည တာမွေပြည်လုံးအေး ဓမ္မာရုံ မီးလာရှို့တဲ့ ထောင်သားတွေကို ဒေါ်သက်သက်ခိုင်သမီး G ရဲ့ ရှင်သန်မှုလူမှုကူညီရေးအသင်းပိုင်ကားတွေနဲ့ လာရောက်ချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Mizzima သတင်းဌာန တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင် ရပ်ကွက်သူ/သားများမှ ပြောကြား။
ထောင်သား နှစ်ဦးကို လက်ရှိ ဓမ္မာရုံထဲ ချုပ်ထားပြီး ရဲလက်မအပ်ဟု ဆို၊ ထောင်သား နှစ်ဦးအား ဖမ်းမိစဉ် ၎င်းတို့က ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဟု မှတ်သားထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တခုကို ဆက်ခဲ့ကြောင်း ရပ်ကွက်ကပြော ထောင်သား ၂ ဦးက ၎င်းတို့ကို ၁ ဦးလျှင် ၇၀၀၀၀ ပေးပြီး ခေါ်လာခြင်းဖြစ်ဟု ထွက်ဆို
နေပြည်တော်CDM ကိုဝန်းရံကြပါ။ ကူကြပါ။
Keyboard fighter တို့ရေပြန်ကူးပြီးတင်ပေးပါ
15/02/2021 12:49 am
အာဏာသိမ်းသူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းတောင်မင်းအောင်လှိုင်သည် ၁၃-၂-၂၀၂၁ မနေ့က နိုင်ငံသားများ၏လွတ်လပ်မှုနီင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက် NLD အစီုးရပြဌန်းထားခဲ့သည့် နိုင်လွတ်လုံဥပဒေကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထိုအပြင်ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုလည်း ၁၃-၂-၂၀၂၁ မနေ့ကပင် နှိပ်ကွတ်သောဥပဒေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာ အာဏာသိမ်းသူပုန်အဖွဲ့သည် ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုအခြေခံကာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရေရှည်ဖိနှိပ်၊ အုပ်ချုပ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် ပြည်သူများအနေနှင့် ပြည်သူ့အုပ်ခိုပ်ရေးယန္တရားများကို အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းသူပုန်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းသူ ရပ်ကျေးပြည်သူ့သစ္စာဖောက်များအား ပြည်သူ့အားဖြင့်ဝိုင်းဝန်းနှိမ်နင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ထိုအတူစစ်အာဏာသိမ်းသူပုန်အဖွဲအား အရှိန်အဟုန်မြင့်ကာ တိုက်ပွဲဝင် ဆန်ကျင့်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
(က) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးCDM တွင်ပူးပေါင်းရန်၊
ယန္တရားရပ်ဆိုင်းရန်ဆိုသည်မှာ အစီုးရယန္တရားတင်မကပဲ ယန္တရားအားလုံးရပ်ဆိုင်းစေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ပြည်သူများ ခြေတစ်လှမ်းနောက်မကျပါစေနှင့် ပြည်သူ့အုပါချုပ်ရေးအဖွဲ့များအမြန်ဖွဲ့စည်းကြပါ။”
15/02/2021 2:45 am
မြစ်ကြီးနား လျှပ်စစ်ရုံး ဆန္ဒပြဖြိုခွဲမှုဖြစ်စဥ်မှာ တိုက်ရိုက် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်နေတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို တပ်က ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ ဒေသခံ သတင်းထောက်တွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
15/02/2021 4:04 am
တရုတ်က ကျွေး၊ မြန်မာ စစ်တပ်က မွေး၊ တရုတ်ကို အဖေခေါ် မြန်မာ စစ်တပ်ကို ကျွန်ခံ နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တဖွဲ့ စပြီး ဇာတိပြပါပြီ - မြစ်ကြီးနားမှာ စစ်ကားတွေ ရောက်လာပြီး ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်း လို့ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေ အလူးအလဲ ခံနေရတဲ့ အချိန် ဘယ်မှာလဲ KIA KIO တို့? မသိနားမလည် ရိုးသားတဲ့ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားကို လိမ်ညာပြီး ကိုယ့်လို ကျွန်ဇာတ်သွင်းနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ရွံစရာ ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ...
ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ရောက်ဖို့သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားအရံငွေတွေ စစ်တပ်ကအကုန်သိမ်းသွားပြီ .....
စစ်တပ်က မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ငွေများလာရောက်ထုတ်ယူသွား
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ၁ ကနေ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီလောက်မှာ စစ်တပ်က ငွေတွေ လာထုတ်ယူသွားတယ်လို့ ဘဏ်နဲ့ နီးစပ်နဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကနေ ဒီဗွီဘီကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။
အလားတူ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ၂ ကနေလည်း ဒီနေ့မနက် ၈ ရီလောက်မှာ စစ်တပ်က ငွေတွေလာရောက် ထုတ်ယူသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်က ဘာကြောင့်ငွေတွေလာထုတ်ယူသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ ထုတ်ယူသွားတဲ့ ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟိုဘဏ်ရှေ့မှာတော့ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် မနက်က စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ လာရောက် ဆန္ဒပြနေကြပြီး စစ်တပ်တွေ ချထားတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာ အများပြည်သူအသုံးပြုနေတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုလည်း ဒီနေ့မနက် ၁ နာရီလောက်ကနေ ၉ နာရီအထိ စစ်အစိုးရက ပိတ်ပစ်ထားပါတယ်။